लकडाउनले रगत पाउनै मुस्किल !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २६, २०७६ बुनु थारु
काठमाडौँ — कञ्चनपुरकी ३७ वर्षीया लक्ष्मीदेवी चौधरी मिर्गौलापीडित हुन् । उनलाई समयसमयमा रगत आवश्यक परिरहन्छ । सुरुमा भारतमा डायलसिस गराउँदै आएकी उनी हाल काठमाडौंको सुमेरु अस्पतालमा गराउँछिन् । उनकी भतिजी उर्मिला भन्छिन्, ‘लकडाउनले गर्दा रगत खोज्न निकै समस्या भयो । उहाँको ब्लड ग्रुप एबी पोजिटिभ हो । यो पाउन झन् गाह्रो रहेछ ।’
डायलसिस गराउन जान एम्बुलेन्सपनिनपाइने र अघिल्लाेचाेटि ३ दिन कुरेर मात्ररगतपाइएको उनी सुनाउँछिन् ।
काठमाडौंका सुविन्द्र प्रधानका दाइलाई रगत संक्रमणको रोग छ । ए पोजिटिभ ब्लड ग्रुप रहेका उनलाई केही दिनअघि रगत चाहियो । तर लकडाउनमा रक्तदान गर्ने व्यक्ति भेट्नै हम्मे पर्याे । एक साथीले फेसबुकमा स्ट्याटस राखिदिएपछि जसाेतसाे रगत जुट्याे ।सुविन्द्र भन्छन्, ‘खै लकडाउनको असर होला, दातालाई पनि आवतजावतमा समस्या छ । गाह्रो भइरहेछ ।’
रगतका समूहमध्ये ‘ओ’ र ‘ए’ सहज रूपमा पाउन सकिन्छ भने ‘बी’ र ‘एबी’ कम मात्रामा पाइन्छ । नेगेटिभ रगत झनै कम पाइन्छ । त्यसैले यस्ता बिरामी याे बेला अझ मर्कामा परेका छन् ।
सरकारले कोरोना भाइरस राेग (कोभिड–१९) को रोकथामका लागि चैत ११ देखि लागू गरेको लकडाउन दुईपटक थपेर वैशाख ३ सम्म लम्ब्याएको छ । लकडाउनले विभिन्न क्षेत्रमा असर त गरेको छ नै, रगत खोजीमा रहेकाहरूलाई पनि दुःख दिइरहेको छ ।
रक्तस्राव, प्रसूति, दुर्घटना, शल्यक्रियालगायत अवस्थामा रगत आवश्यक हुने गर्छ । त्यसका साथै ल्युकेमिया, हेमोफिलिया, थालेसेमियाका रोगीलाई पटकपटक रगतको आवश्यकता पर्छ ।
देशभर तथा विशेष गरी राजधानीमा ठूला दुर्घटना तथा विपत्तिमा रगतको अभाव हुने गर्छ । कोरोनाको महामारीमा अस्पतालले पनि अत्यावश्यकबाहेक तत्कालका लागि स्वास्थ्य–उपचारमा कटौती गरेका छन् ।
रगत संकलन गरी वितरण गर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सूचना अधिकृत दिव्यराज पौडेल भने रगत संकलन कम भए पनि गाह्रो स्थिति आइनसकेको बताउँछन् । ‘राजधानीमा अरू बेला दैनिक ३०० देखि ४०० युनिट हाराहारीमा रगत आवश्यक हुन्छ । देशभर भन्नुपर्दा ७०० देखि ८०० युनिट आवश्यक हुन्छ । लकडाउनको प्रभावले अहिले १० देखि २० प्रतिशत मात्र रगतको माग छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार प्रसूति र पुराना बिरामीलाई रगतको आवश्यकता बढी छ । इच्छुक दाताले ११३० मा फोन गरेर नाम टिपाउन सक्नेछन् । रगत अभाव हुन नदिन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुरले स्वयंसेवी रक्तदाताबाट टोलटोलमै पुगेर संकलन र व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको उनले जनाए ।
बाहिर आउन नसक्ने दाताका लागि प्राविधिक घरमै पुगेर रगत लिने व्यवस्थासमेत मिलाइएकाे सोसाइटीले जनाएकाे छ ।
केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा (ब्लड बैंक) की निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकार लकडाउनपछि रगतको माग र आपूर्ति दुवै घटेको बताउँछिन् । उनका अनुसार रगतको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिए पनि गाह्रो स्थिति आइपरेको छैन ।
उनका अनुसार अहिले दिनमा ५० युनिट मात्रै रगत गइरहेको छ । भिडभाड गर्न नमिल्ने भएकाले पहिलेजस्ताे रक्तदान शिविर गरिएका छैनन् । अस्पताल आफैंले पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । ठूलै दुर्घटनामा केही गाह्रो हुन सक्ने भए पनि अहिले दैनिक रूपमा रगत व्यवस्थापन भइरहेकाे उनले बताइन् ।
कोरोनाको भयले धेरैजसाे दाता बाहिर जान त्यति सहज मान्दैनन् । तर स्वस्थ व्यक्तिले रक्तदान गर्न सक्छन् । नजिकको स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालका रक्तसञ्चार इकाइमा गएर रगत दान गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
अस्पतालहरू अहिलेको अवस्थामा रगत व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार अरू बेलाभन्दा अहिले बिरामीलाई रगतको जोहो गर्न अप्ठेरो छ । ‘अहिलेसम्म रगत नभएर शल्यक्रिया नै रोक्नुपरेको अवस्था आएको छैन । तर अरू बेलाभन्दा बिरामीलाई दौडधुपचाहिँ भएको छ,’ उनले भने ।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार रगतको माग नै ४० प्रतिशले घटेकाले खासै समस्या छैन । इमरजेन्सीबाहेक अरू शल्यक्रिया नगरिएकाले अभाव नभएको हो । अस्पतालमा रहेको ब्लड बैंकबाटै व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार क्यान्सरका बालबालिकालाई धेरै रगतको आवश्यकता पर्छ । उनीहरूलाई आफन्त तथा अस्पतालकै स्टाफबाट रगतको व्यवस्था भइरहेको छ । ब्लड बैंकमै कम संकलन र लकडाउनले गर्दा अरू बेलाभन्दा बिरामीलाई अप्ठ्यारो सिर्जना भएको पौडेल बताउँछन् ।
नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्य भने बजारमा सुनिएजसरी रगतको असाध्यै अभाव नभएको बताउँछन् ।
‘हामी रक्तदाताले यसमा सहयोग गरेका छौं । होम क्वारेन्टाइनमा बसेका दाताहरूबाट नै अहिले रगत व्यवस्थापन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘रगतको अभाव छैन । लकडाउनले गर्दा इलेक्टिभ सर्जरीहरू अहिले बन्द छन्, त्यसैले रगतको माग कम छ ।’
रगत दिन इच्छुक तर बाहिर आउन नमान्नेलाई घरमै प्राविधिक पठाउने व्यवस्था गरिएकाे समाजले जनाएकाे छ । अध्यक्ष कर्माचार्य भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार रक्तदाता समाजले गाह्रो परेकालाई सहयोग गरेको छ तर सुरक्षाका हिसाबले रक्तदातालाई गाह्रो भने छ ।’
प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ १२:३५
बाहिरबाट आएका छोरालाई छुट्टै राखेर कोरा
चैत्र २६, २०७६ हरिराम उप्रेती
गोरखा — सिरानचोक गाउँपालिका–७ उपल्लो गोहोरेकी ९७ वर्षीया श्रीमाया भट्टको सोमबार राति निधन भयो । मंगलबार सय जनाभन्दा बढी छिमेकी र आफन्त मलामी जाने तयारीमा जुट्दै थिए । लकडाउनका बेला यति ठूलो समूह भेला भएपछि टोलस्तरीय प्रतिकार्य समितिको बैठक बस्यो । बैठकले १२ जना मात्र मलामी जाने निर्णय लियो ।
‘गाउँबाट दरौंदीको घाट पुग्न झन्डै दुई घण्टा लाग्छ,’ विनोद पाण्डेले भने, ‘बोक्न सक्ने बलिया नजिकका छिमेकी र आफन्त १२ जना मात्र सागर गयौँ ।’ मलामीलाई स्थानीय स्तरमै सेनिटाइजर र मास्कको व्यवस्था गरिएको थियो ।
पाण्डेका अनुसार आमाको काजक्रियाका लागि काठमाडौंबाट आएका माइला छोरालाई छुट्टै राखिएको छ । ‘चार भाइ छोरामध्ये तीन जना गाउँमै हुनुहुन्थ्यो, माइला छोरा हिजो काठमाडौंबाट आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँलाई तीन भाइभन्दा दुई मिटर टाढै राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’ माइला छोरालाई मास्क लगाउन दिइएको छ । अर्को गाउँबाट आउने आफन्त तथा छिमेकीलाई पनि सकेसम्म टेलिफोनबाट समवेदना दिन भनिएको छ ।
उक्त वडामा लकडाउन अवधिभर कसैको निधन भए १२ जना मात्र मलामी जान पाउने निर्णय भएको वडाध्यक्ष सुरज ढकालले बताए । यहाँ मात्र २४ वटा ‘कोरोना प्रतिकार्य समूह’ गठन भएका छन् ।
समूहले गाउँमा आउने पाहुनालाई समेत फर्काउने गरेको छ । गत आइतबार धावाबाट आएकी एक महिला एक रात पनि माइत बस्न पाइनन् । प्रतिकार्य समूहले कि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने, नभए फर्कनुपर्ने जनाएपछि उनी आएकै दिन फर्किएकी हुन् । ‘तीन–चार जना पाहुनालाई कि क्वारेन्टाइन बस्नुस्, नत्र फर्कनुस् भनेछि अहिले अर्को टोलबाट गाउँमा सितिमिती मान्छे आउँदैनन्,’ उनले भने ।
लमजुङको बिचौरबाट मामाघर आएका एक युवकलाई पनि फिर्ता पठाइएको वडाअध्यक्ष ढकालले बताए । ‘गाउँबाट बाहिर को जाँदै छ, को भित्रियो निगरानी गर्छौं,’ उनले भने । टोल स्तरमै गठन भएको समूहले तास खेले/नखेलेको, सवारी चल्न रोक्नुका साथै सामूहिक रूपमा भेला भए/नभएको पनि निगरानी गर्छ । ‘यसरी समूह गठन गर्दा साह्रै प्रभावकारी भएको छ,’ उनले भने, ‘टोल स्तरमा केही समस्या देखिए समूहका सदस्य मिटिङ बसेर निर्णय लिन्छन् ।’
सिरानचोक गाउँपालिकाभरि १ सय ४८ प्रतिकार्य समूह गठन भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ बताउँछन् । ‘२० देखि ३० घरसम्मको एक समूह छ, प्रत्येक समूहमा दुई महिला र दुई पुरुष सदस्य छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले आफ्नो टोलमा लकडाउन पालना गराउनुका साथै नयाँ मान्छे को–को भित्रिए, निगरानी गर्छन् ।’ नयाँ मान्छेलाई गाउँपालिका भित्रने नाकामै समूहका सदस्यले सोधीखोजी गर्छन् ।
समूहले टोलमा कुनै समस्या देखिए वडाध्यक्षलाई सुनाउँछन् । वडाध्यक्षले गाउँपालिका अध्यक्षलाई भनेपछि समाधान छिटो–छरितो हुने गरेको छ ।
प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ १२:१३